ZX Spectrum yakamutswa paLinux nekutenda kune emulator | Linux Vakapindwa muropa
Iyo ngano brand Sinclair akatisiira ngano chaidzo munguva pfupi yapfuura yezera redu remakomputa. Pamusoro pazvose, pane komputa yakamira kubva kune vamwe vese uye yakave imwe yeanonyanya kufarirwa wenguva, ndiyo inozivikanwa ZX Spectrum.
El ZX Spectrum Iyo microcomputer yenhoroondo yakatangwa nekambani yeBritish muna 1982, iinewo 80-bit Zilog Z8A microprocessor yaive yakanakisa yenguva yemba. MuEurope yakava imwe yemakomputa epamba anotengwa kwazvo kuma80s.
Parizvino ZX Spectrum komputa inochiva zvakanyanya ne vateresi uye nekudaro inotemerwa mutengo. Uye zvakare, nekuda kwezera rayo uye kunetsekana pakuwana zvikamu zveparutivi, izvo zvichiri kushanda zvinoshomeka.
Kana iwe uchida kuregera izvo Mwaka wegoridhe yekomputa uye yekutamba yengano mitambo yevhidhiyo yema80s munzira yakazara, unogona kushandisa yako Linux kuendesa ku gadza emulator yeZX Spectrum seizvi:
Enda kune terminal uye nyora rugwaro runotevera kuti uvandudze iyo system (kana uchishandisa Sudo, uchafanirwa kutaipa password yako painokumbira):
Kana iko kugadzirisa kwapera, iwe uchazoziva nekuti iyo kukurumidza, unofanirwa kunyora izvi:
Kamwe iyo emulator yeZX Spectrum yaiswa uye mapakeji anodikanwa ekushanda kwayo atorwa pasi (libspectrum8 raibhurari), iyo ROMs Vakuru veSinclair System
Iye zvino, kubva pakombiyuta kutanga menyu, muchikamu chemitambo, unogona kuwana emulator. Unogona kudhawunirodha mitambo kubva worldofspectrum.org uye kurodha pasi pa TZX fomati (iyo chaiyo fomati yeSpectrum michina).
Nhanho inotevera ndeyekufara ...
Ndinovimba iwe unofarira ichi chidzidzo chekuzvininipisa uye chinokuyeuchidza nezvenguva dzekare, uye kuti iwe unogona kudzokera kunotamba iyo mitambo iyo inomutsa kwazvo kufungidzira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Kumutsa ZX Spectrum mitambo paLinux
Nhasi manheru kuti titeedzere dzidziso ... Uye kuti urangarire iyo yakasarudzika 48k yerabha keyboard ..
Alpine Linux: kuunza mutorwa